ကိုဗစ်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမယ့် အရေးကြီးအချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့ ဘင်ဂျမင် – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုများပြားလာတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တွေလည်း ကြုံတွေ့နေပြီး သေဆုံးသူတွေလည်း များပြားလျက်ရှိပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရရင် စိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုဘဲ သေသေချာချာ အစားအာယာရပြည့်ဝတာတွေ စားသောက်ပြီး ဂရုစိုက်နေထိုင်ပါက ပျောက်ကင်းနိုင်မှာ အသေ ချာပါပဲ..။
ဒီလို ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရရင် အားမလျော့ဘဲ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ အဆိုတော် Benjamin က ခုလို ရေးသားဝေမျှလာပါတယ်။ ” covid-19 ဖြစ်ပြီဆို တော်တော်များများကကြောက်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျလာတာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြောက်ခဲ့ပါတယ် စိတ်ကျခြင်းက ရောဂါကို ပိုဆိုးစေတာကြောင့် အဓိက စိတ်မကျဖို့လိုပါတယ် ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက္ခဏာပြတာမတူတာရယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆေးလောကနယ်ပယ်ကမဟုတ် တဲ့အတွက် ဆေးတွေကိုတော့ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့စဉ် က လုပ်ခဲ့တာလေးတွေကိုသာကျွန်တော် ပြန်လည်ဝေမျှတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ “
” – Vitamin C ၊ Zinc ၊ D3 တွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပုံမှန်သောက်ပါတယ်ဗျ။ ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအရ တခြားဆေးတွေလည်းသောက် ပါတယ် ခင်ဗျ။ ကြောက်လန့်ပြီး ဆေးကိုလိုတာထက်အလွန်အကျွံမသောက်မိဖို့တော့လိုပါတယ်။ – အဖျားတစ်နေ့ (၃) ခါတိုင်းပါတယ်၊ oxygen level နဲ့ သွေးပေါင် တစ်နေ့ (၂) ခါတိုင်းပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့ကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့သုံးကြိမ်ရှူပါတယ် (တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ)။ အိပ်ရာနိုးတိုင်း ရေနွေးနဲ့ ဆားအရောကို အာခေါင်ထိရောက်အောင် ပလုတ်ကျင်းပါတယ် ။ – ဟင်းရည် or soup ပူပူတွေ သောက်ပါတယ်။ ထမင်းစားခါနီးလည်း အစာကို ပူအောင်ပြန်လုပ်ပြီးမှ စားပါတယ်။ ရေခဲရေကိုလုံးဝရှောင်ထားပြီး ပုံမှန် room temperature ရေ နဲ့ရေနွေးကိုအမြဲသောက်ပါတယ်ဗျ။ – အများကြီးအိပ်ပါ..။
ညဘက်တွေကောင်းစွာ အိပ်စက်အနားယူဖို့လိုပါတယ် ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့ ကာလဖြစ်ပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး စ်ိတ်ကိုလျော့ချပြီး ပျော်အောင်နေရင်း ကောင်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပါ ။ ကိုယ်ခံအားနဲ့ပဲပြန်တိုက်ရတဲ့ virus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ အားရှိစေတဲ့အစားအသောက်တွေ စားဖို့လိုပါတယ် ခင်ဗျ။ မျှော်လင့်ချက်ကိုလက်မလွှတ်ဘဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာရေးကိုအားစိုက်လုပ်ပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်သာ အဓိကနေထိုင်စားသောက်ရင်း အား တင်းထားကြမယ် ခင်ဗျာ ။ you can do it. God Bless You ” ဟုဆိုပြီး စုံစုံလင်လင် ရေးသားဝေမျှ ထားရာ ပရိသတ်ကြီးလည်း အကျိုးရှိစေရန် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း
ခဈြလှစှာသောပရိတျသတျကွီးရေ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျမှုတှေ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပိုပိုမြားပွားလာတဲ့ အခွအေနတှေမှော အောကျဆီဂငျြမလုံလောကျတှလေညျး ကွုံတှနေ့ပွေီး သဆေုံးသူတှလေညျး မြားပွားလကျြရှိပါတယျ။ ရောဂါကူးစကျခံရရငျ စိတျဓာတျကစြရာမလိုဘဲ သသေခြောခြာ အစားအာယာရပွညျ့ဝတာတှေ စားသောကျပွီး ဂရုစိုကျနထေိုငျပါက ပြောကျကငျးနိုငျမှာ အသေ ခြာပါပဲ..။
ဒီလို ကိုဗဈကူးစကျခံရရငျ အားမလြော့ဘဲ လုပျဆောငျသငျ့တဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ကိုယျတိုငျ ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျခံခဲ့ရပွီး ပြောကျကငျးခဲ့တဲ့ အဆိုတျော Benjamin က ခုလို ရေးသားဝမြှေလာပါတယျ။ ” covid-19 ဖွဈပွီဆို တျောတျောမြားမြားကကွောကျပွီး စိတျဓါတျကလြာတာပါ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ကွောကျခဲ့ပါတယျ စိတျကခြွငျးက ရောဂါကို ပိုဆိုးစတောကွောငျ့ အဓိက စိတျမကဖြို့လိုပါတယျ ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ လက်ခဏာပွတာမတူတာရယျ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ဆေးလောကနယျပယျကမဟုတျ တဲ့အတှကျ ဆေးတှကေိုတော့ ဆရာဝနျ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး သောကျသုံးပေးပါဗြာ။ ကြှနျတျောဖွဈခဲ့စဉျ က လုပျခဲ့တာလေးတှကေိုသာကြှနျတျော ပွနျလညျဝမြှေတာ ဖွဈပါတယျခငျဗြာ “
” – Vitamin C ၊ Zinc ၊ D3 တှကေိုဆရာဝနျညှနျကွားခကျြအတိုငျး ပုံမှနျသောကျပါတယျဗြ။ ကိုယျ့ရဲ့အခွအေနအေရ တခွားဆေးတှလေညျးသောကျ ပါတယျ ခငျဗြ။ ကွောကျလနျ့ပွီး ဆေးကိုလိုတာထကျအလှနျအကြှံမသောကျမိဖို့တော့လိုပါတယျ။ – အဖြားတဈနေ့ (၃) ခါတိုငျးပါတယျ၊ oxygen level နဲ့ သှေးပေါငျ တဈနေ့ (၂) ခါတိုငျးပါတယျ။ ရနှေေးငှကေို့ အနညျးဆုံး တဈနသေုံ့းကွိမျရှူပါတယျ (တကယျအလုပျဖွဈပါတယျခငျဗြ)။ အိပျရာနိုးတိုငျး ရနှေေးနဲ့ ဆားအရောကို အာခေါငျထိရောကျအောငျ ပလုတျကငျြးပါတယျ ။ – ဟငျးရညျ or soup ပူပူတှေ သောကျပါတယျ။ ထမငျးစားခါနီးလညျး အစာကို ပူအောငျပွနျလုပျပွီးမှ စားပါတယျ။ ရခေဲရကေိုလုံးဝရှောငျထားပွီး ပုံမှနျ room temperature ရေ နဲ့ရနှေေးကိုအမွဲသောကျပါတယျဗြ။ – အမြားကွီးအိပျပါ..။
ညဘကျတှကေောငျးစှာ အိပျစကျအနားယူဖို့လိုပါတယျ ၊ စိတျဖိစီးမှုမြားနတေဲ့ ကာလဖွဈပမေဲ့ အတတျနိုငျဆုံး ဈိတျကိုလြော့ခပြွီး ပြျောအောငျနရေငျး ကောငျးစှာ အိပျစကျအနားယူပါ ။ ကိုယျခံအားနဲ့ပဲပွနျတိုကျရတဲ့ virus ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကိုယျခံအားကောငျးဖို့ အားရှိစတေဲ့အစားအသောကျတှေ စားဖို့လိုပါတယျ ခငျဗြ။ မြှျောလငျ့ခကျြကိုလကျမလှတျဘဲ ကိုယျယုံကွညျရာ ဘာသာရေးကိုအားစိုကျလုပျပွီး ကိုယျခံအားကောငျးအောငျသာ အဓိကနထေိုငျစားသောကျရငျး အား တငျးထားကွမယျ ခငျဗြာ ။ you can do it. God Bless You ” ဟုဆိုပွီး စုံစုံလငျလငျ ရေးသားဝမြှေ ထားရာ ပရိသတျကွီးလညျး အကြိုးရှိစရေနျ ပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျး